रहस्यमय निधनमा किष्ट अस्पतालले गर्यो सीसीटीभी सार्वजनिक ! संक्रमितको यसरी गएको रहेछ ज्यान (भिडियो हेर्नुस्):: Naya Nepal
रहस्यमय निधनमा किष्ट अस्पतालले गर्यो सीसीटीभी सार्वजनिक ! संक्रमितको यसरी गएको रहेछ ज्यान (भिडियो हेर्नुस्)
ललितपुरको किष्ट अस्पतालमा को रोना सं’क्रमित बिरामीको रह’स्यमय नि धन भएको घ टनामा अस्पतालको सीसीटीभी सार्वजनिक भएको छ । बुधबार बिहान बिरामीको रहस्यमय नि धन भएपछि आफन्तले अस्पतालमा घे राउ गरेका छन् । उनीहरुले घ टना र’हस्यमयी भन्दै छानविनको माग गरेका छन् । गत शनिवार को रोना पुष्टि भएपनि नुवाकोट तादी गाउँपालिकाका शेरबहादुर लामालाई ललितपुरको किष्ट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
परिवारले अस्पतालको लापरवाहीका कारण विरामीको निधन भएको भन्दै घ टना छानविनको माग राखेका छन् । आफन्तलाई देखाइएको सीसीटीभी फुटेज पनि धमिलो छ । शौचालय जाँदा ल डे र निधन भएको भनिएपनि सीसीटीभी फुटेज हेर्दा उनको अस्पतालको वेडमै नि’धन भएको जस्तो देखिन्छ । अस्पतालका नर्शहरुले चलाउँदा उनी चलेको देखिन्न ।
अस्पतामा राम्रो उपचार नपाएको भन्दै गुनासो गरेका शेरवहादुरको नि धन भएको हो । उनले आफन्तलाई फोन गरेर आफुलाई अस्पतालमा राम्रो उपचार नगरेको भन्दै सुनाएका थिए । अघिल्लो दिन राती त्यसो भनेर आफन्तलाई सुनाएका शेरवहादुरको भोलीपल्ट नि’धन भएको भन्दै अस्पतालवाट खबर पुगेको थियो । बुवाले त्यसो भनेपछि शेरवहादुरको छोरी तारा मोक्तानले अस्पतालमा फोन गरेर राम्रो उपचार गर्न आग्रह पनि गरेको बताएकी छन् । स्वास्थ्यमा समस्या भएर विरामीले बोलाउँदा पनि चिकिस्सक हेर्न समेत नगएको बुवाले बताएको छोरीको भनाई छ ।
आज बिहान बुवा बिहान ट्वाइलेटमा ढ ले को र आसियूमा लगेर उपचार गर्दा नि धन भएको भन्दै अस्पतालले फोन गरेको भएपनि सीसीटीभी फुटेज हेर्दा अर्कै दृष्य देखिन्छ । फुटेजमा सीसीटीभीमा हेर्दा नि धन भएपछि मात्र आइसियुमा लगेको जस्तो देखिएको दावी गरेका छन् । शेरवहादुरको छोरी मोक्तानले गएरातीसम्म परिवारको सम्पर्कमा रहेर कुरा गरिरहेको मान्छे आज बिहान नि’धन हुनु् रहस्यमय भएको बताउँदै अस्पतालबिरुद्ध का’रवाहीका लागि उजुरी दिने बताइन् ।